यी बलिउड कलाकारहरु जसलाई नेपालीहरु पट्टक्कैं मन पराउँदैंनन ! [कारणसहित] « The News Nepal
यी बलिउड कलाकारहरु जसलाई नेपालीहरु पट्टक्कैं मन पराउँदैंनन ! [कारणसहित]
काठमाडौं । नेपालको नजिककको छिमेकी राष्ट्र भारत र नेपालबीच सुरुवातदेखि नै कुटनितिक , भौगोलिक र सांस्कृतिकरुपले पनि केही न केही बिवाद हुदै आईरहेको छ । त्यसमा बलिउड पनि अछुतो रहने कुरा भएन । भारतले नेपालबाट चलचित्र क्षेत्रबाट मात्रैं दैंनिक लाखौं करोडौंको व्यापार गर्दै आइरहेको छ । कुनै समय बलिउडका केही हस्तीहरुले नेपाल र नेपालीका बारेमा बिवादास्पद बयानहरु दिएर निकै आलोचनामा आएका थिए । ती हस्तीहरु बलिउडका चर्चित सेलिब्रेटीहरु नै थिए । नेपालबारे बिवादास्पद बयान दिएर आलोचनामा आएका हस्तीहरुको बारेमा आउनुस आज जानौ…
माधुरी दिक्षितः बलिउडमा धकधक गर्लको नामबाट परिचित माधुरी दिक्षित पनि आफनो सफल करियरका दौरान नेपालबारे बिवादास्पद बयान दिएर खुबै आलोचनामा आएकी थिईन् । उनले १९८० मा नेपाल भारतको अस्तित्वमा रहेको राष्ट्र भन्ने बयान दिएपछि नेपालमा उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । धमेन्द्रः बलिउडका पुराना स्टार धमेन्द्रको लोकप्रियता त्यससमय नेपालमा पनि थियो तर उनले सन १९७० मा बिवादास्पद बयान दिएको कारण नै उनको फिल्म समेत नेपालमा प्रर्दशनमा रोक लगाईएको थियो ।
ऋतिक रोसनः ऋतिकले पनि आफनो करियरको सुरुवाती दिनमा नै नेपालबाट घृणा बटुलेका थिए । डेब्यु फिल्म कहो ना प्यार है को रिलिजताका उनले नेपाल र नेपालीलाई घृणा गर्छु भन्ने बयान दिएका थिए । उक्त बयानपछि आक्रोसित भएका नेपालीहरुले उनको फिल्मलाई त्यसपछि रोक लगाएका थिए । यो खबर भाईरल भएपनि ऋतिककले आफुले यस्तो बयान नदिएको भन्दै नेपाल र नेपालीलाई घृणा गर्नु पर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै आफनो स्पष्टीकरण दिएका थिए । त्यसका बाबजुद पनि उनका त्यसपछिका फिल्म फिजा र मिसन कश्मिरले नेपालमा खासै माया पाएको थिए ।
शक्ति कपुरः बलिउडका चर्चित भिलेन शक्ति कपुर आफैमा पनि बिवादीत व्यक्ति हुन् । उनको नाम कास्टिङ काउचको सवालमा पनि टिभी जर्नालिस्टहरुले सबुत सहित पर्दाफास गरेका थिए । उनै शक्ति कपुर नेपालमा भोजपुरी फिल्मको सुटिङको क्रममा नायिका रेखा थापालाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै समाचार आएपछि उनी पनि नेपालमा घृणाको सिकार बने ।
कोमल नाहताः बलिउड फिल्मका पत्रकार एवं टे«ड एनालिस्ट कोमल नाहता पनि नेपालसम्बन्धी बयान दिएर बिवादमा आएका थिए । उनले सारुख खानको फिल्म ‘डन २’ को कलेक्सनको बारेमा बोल्दै टिभी शोमा नेपाल भारतको पार्ट भनेका थिए । उक्त बयानको कारण निकै बिवाद भएपछि उनले नेपालीसंग माफी माग्दै आफनो स्पष्टीकरण दिएका थिए । सलमान खानः बलिउडका दंबग सलमान खान पनि बिनासकारी भुकम्प गएको समय बिवादमा आएका थिए । नेपालमा गएको बिनासकारी भुकम्पको समय एक भिडियामा पत्रकारले उनको संस्था बिईङ ह्युमन बाट नेपालको लागि के सहयोग जान्छ भनी सोधिएको थियो ।
त्यसको जवाफमा उनले बिईङ ह्युमन सस्थाले भारतमा मात्र सामाजिक सेवा गर्ने तर अन्य राष्ट्रको लागि सहयोग नगर्ने भन्ने बयान दिएपछि नेपालीहरुले खुबै आलोचना गरेका थिए । जुही चावलाः बलिउडकी चर्चित नायिका एवं पुर्व मिस इण्डियासमेत रहेकी जुही चावला नेपालमा पनि उतिकै चर्चित छिन तर केही समय अगाडी नेपाल भ्रमणमा रहेककी जुहीले नेपालीहरुको गाली खाएकी थिईन । भ्रमणको क्रममा काठमाडौँमा रहेकी जुही सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौँ धुलो मैलो धेरै भएको र सबैल सर्जिकल मास्क लगाएर हिडने गरेको भन्ने लेखेपछि उनीमाथि गाली बर्सियो ।